Mautic kuisirwa paUbuntu 20.04 uye Apache | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nguva yapfuura ndakakuudza nezve Mautic, yakavhurwa sosi chikuva chekugadzirisa makwikwi ekushambadzira. Ngatione maitiro ekuiisa pane chaiyo yakavanzika server (VPS) inomhanya Ubuntu 20.04 uye iyo Apache server.
Isu tinofanirwa kutakura mupfungwa kuti mupi wega wekutambira anotangisa masisitimu akasiyana, saka ungatofanira kugadzirisa.
1 Iyo Mautic nzvimbo. Chii chinodiwa
1.1 Kugadziriswa kwepamberi
1.2 Saiti imwechete kana multisite?
1.2.1 Matanho ekutanga ekumisikidzwa kweMautic pamwe nemamwe mawebhusaiti
Iyo Mautic nzvimbo. Chii chinodiwa
Izvo zvinodiwa zvekuisa Mautic (Nezvinangwa zvechinyorwa chino) zvinotevera:
Apache 2x kana yakakwira.
MaríaDB 10.1 kana MySQL 5.5.3.
PHP 7.4 kana kupfuura.
Yega yakavanzika sevha inzira yekugovana zviwanikwa zvemuviri server pasina mitengo yekuve neyesevha yemuviri kune wega mushandisi asi ichipa yega yega imwe kudzora kupfuura echinyakare kuitisa zvirongwa. Imwe neimwe sevha chaiyo ine yayo inoshanda sisitimu uye inogona kudzoreredzwa zvakasununguka.
Imwe poindi yekuchengeta mundangariro ndeyekuti kune mamwe marongero ekugadzirisa aunogona kuita muhurongwa hwekushandisa pane sevhisi yepanyama, paVPS uchafanirwa kuzviita kubva padanho rekutonga rinopihwa nemupi wako wekutambira kana kukumbira kuti riite ..
Chekutanga pane zvese, ini ndinokurudzira kuti iwe uverenge izvi zvinyorwa zviviri
Tisati tatanga nekumisikidzwa kweMautic isu tinofanirwa kugadzirisa iyo firewall.
Iyo firewall inetiweki chengetedzo chishandiso iyo inoongorora inouya uye inobuda network network uye inobvumira kana kuvhara data mapaketi zvichienderana neseti yemitemo yekuchengetedza. Tinogona kuwana mhando mbiri dzemaseva:
External firewall: Inowanikwa nehurongwa hwekugamuchira. Kubatsira kukuru ndekwekuti kunyangwe iwe ukaisa kangani sisitimu yekushandisa pane chaiyo server, haufanire kuyeuka kugadzirisa iyo firewall.
Yemukati firewall: Ubuntu inoshandisa default firewall inonzi UFW (Uncomplicated firewall) UFW inovhara zvese zvinokwanisika zvekupinda kuseva nekutadza, saka isu tichafanirwa kuvhura anodiwa madoko.
Kunyange zvakadaro, kunyangwe kana mupi wekugamuchira iwe waakashandira VPS yako nekukupa iwe nechokunze firewall, iwe unofanirwa zvakare kugadzirisa yemukati.
Isu tinotanga nekuona kuti system yasvika parizvino:
Isu tinoisa zvinoenderana
Isu tinogadzira iyo firewall
Isu tinoshandisa iyo firewall
Ichakuratidza iwe meseji inokuyambira kuti kuita rairo kunogona kukanganisa kubatana kwekure. Dhinda Y kana S sezvazviri kuti ugamuchire.
Ipapo iwe unozoona imwe meseji inokuzivisa iwe kuti iyo firewall inogoneswa uye inozogoneswa yega yega system painotanga.
Tinogona kutarisa kuti firewall iri kushanda na:
Saiti imwechete kana multisite?
Nzira yakanakisa yekutora mukana wega wega wega server ndeyekutora nzvimbo dzakawanda. Muchokwadi, iyo yekumisikidza nzira yakafanana mune ese maviri kesi, chinhu chete chinoshandura yekuisa dhairekitori uye kudiwa kwemamwe matanho ekuwedzera kana ukasarudza iyo multisite sarudzo.
Matanho ekutanga ekumisikidzwa kweMautic pamwe nemamwe mawebhusaiti
Isu tinogadzira dhairekitori kune yega yega webhusaiti yatinoda
/ var / www uye / public_html inoramba iripo. mydomain inotsiviwa nenzvimbo dzauchazoshandisa pane yega yega saiti. Rangarira kuti iwe unofanirwa kutenga dura uye nekumisikidza neDNS yeyako chaiyo yakavanzika server.
Sezvatakataura, mune nyaya yekuti Mautic ndiyo yega saiti yakaiswa pane chaiyo yakavanzika server, aya matanho apfuura haana kudikanwa. Musiyano uripo ndewekuti tiri kuenda kunoshanda pane iyo dir
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mautic kuisirwa paUbuntu 20.04 uye Apache
Ndinoona kuti mafaera anodiwa akaiswa kuti mauti ashande, asi mautic haana kuiswa, zvinoita sekunge zvirimo zvisipo pane zvinotaurwa nemusoro.
Ndipei weekend ndiongorore. Iro nhevedzano yezvinyorwa uye ndinogona kunge ndakanganwa chinongedzo
Mhoro. Iwe unofanirwa kuenda nebrowser kune peji yawakaisa iyo saiti uye womhanyisa mugadziri.